1-AUGUST-2020 FA ဖလားဗိုလ်လုပွဲကြို နှင့် ပရီးမီးယားလိဂ် သတင်းများ - Myanmar Football Arena
1-AUGUST-2020 FA ဖလားဗိုလ်လုပွဲကြို နှင့် ပရီးမီးယားလိဂ် သတင်းများ
[UNICODE] ⚽ ဒီနေ့ည သြဂုတ် ၁ ရက်နေ့ မြန်မာစံတော်ချိန် ည ၁၁း၀၀ မှာ အာဆင်နယ် အသင်း နဲ့ ချဲလ်ဆီး အသင်းတို့က FA ဖလားဗိုလ်လုပွဲ ကန်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အာဆင်နယ် အသင်းက သူတို့ အသင်း ရဲ့ ဆိုးဝါးလှတဲ့ ရာသီကို အနိူင်နဲ့ ပိုင်းဖို့ အပြင် နောက်နှစ် ယူရိုပါလိဂ် ဝင်ခွင့်ရအောင် ရေကုန်ရေခမ်း ကန်မှာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဖက်မှာ ချဲလ်ဆီး အသင်းကလည်း ချန်ပီယံလိဂ် ဝင်ခွင့် ရရှိပြီးဖြစ်ပေမယ့် ဒီဖလားက လမ်းပတ် အတွက် ပထမဆုံး ဖလား ဖြစ်လာဖို့ လက်တစ်ကမ်းအကွာမှာ ရှိတာကြောင့် ချဲလ်ဆီး အသင်းလည်း အနိူင်မခံအရှုံးမပေး ကန်မှာဖြစ်ပါတယ်။
အာဆင်နယ် အသင်းဘက်ကတော့ မူစတာဖီ က တံခေါက်ကြောကြောင့် ခွဲစိတ် ကုသမှု ခံယူရတော့မှာဖြစ်တာကြောင့် ပါဝင်နိူင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ မာရီ လည်း ပါနိူင်မှာ မဟုတ်သလို မာတင်နယ်လီ နဲ့ ချမ်ဘာ တို့လည်း ကစားနိူင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဆိုးရက်စ် ကတော့ cup-tie မိနေလို့ ပါဝင်ခွင့်ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ လီနိူက ဒဏ်ရာက သက်သာလာပြီ ဖြစ်ပေမယ့် အာတီတာကတော့ ထည့်ကန်ဖွယ် မရှိပါဘူး။
အာဆင်နယ် ဖြစ်နိူင်ဖွယ်ရာ လိုင်းအပ် – Martinez, Bellerin, Holding, David Luiz, Tierney, Saka, Ceballos, Xhaka, Aubameyang, Lacazette, Pepe.
ချဲလ်ဆီးအသင်း က ကန်တေ ကတော့ ပြန်ကစားနိူင်မှာ ဖြစ်သလို ဝီလျံလည်း အသင်းနဲ့ ပြန်ပါဝင်နိူင်မှာပါ။ ရူဘင် ကတော့ ပါဝင်နိူင်အုန်းမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ချဲလ်ဆီး ဖြစ်နိူင်ဖွယ်ရာ လိုင်းအပ် – Caballero, James, Azpilicueta, Rudiger, Zouma, Alonso, Kovacic, Jorginho, Mount, Pulisic, Giroud.
လန်ဒန် ပြိုင်ဘက် ကလပ်ပီပီ ၂ သင်းလုံး အနိူင်မခံ အရှုံးမပေး ကန်မှာမလို့ ပွဲကြီး ပွဲကောင်း တစ်ပွဲ ဖြစ်လာမှာပါ။ မနှစ်က မန်စီးတီး နဲ့ ဝတ်ဖိုဒ့်လို ပွဲ မကောင်းမှာ မပူရပါဘူး။ အာဆင်နယ် အသင်း FA ဖလား ဗိုလ်လုပွဲကို ၂၁ ကြိမ်မြောက် ကန်မှာ ဖြစ်ပြီး စုစုပေါင်း ၁၃ ကြိမ် ဗိုလ်စွဲထားပါတယ်။ အာဆင်နယ် က တစ်ခြား အသင်းတွေက ဗိုလ်လုပွဲ ရော ဗိုလ်စွဲတဲ့ အကြိမ်ပါ ပိုများပါတယ်။ ဒါကြောင့် အာဆင်နယ် အသင်းကပဲ ၂-၁ နဲ့ အနိူင်ရ ဗိုလ်စွဲပြီး ယူရိုပါလိဂ် ဝင်ခွင့်ကို ဖလားနဲ့အတူ ရရှိသွားနိူင်ပါတယ်။
⚽ မန်ယူအသင်းက တစ်ကယ်လို့ ဒီလာမယ့် အပြောင်းအရွှေ့မှာ ဆန်ချိုကို အရ ခေါ်ယူနိူင်ခဲ့မယ်ဆိုရင် အသင်း ရဲ့အထင်ကရ နဲ့ ကျော်ကြားလှတဲ့ ကျောနံပတ် ၇ ကို ပေးဖို့အတွက် အဆင်သင့် ဖြစ်နေတယ် ဆိုပြီး Daily Mail က ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
⚽ ဗစ်တာ အိုဆင်ဟမ် က နာပိုလီ အသင်းကို ပေါင် သန်း ၅၀ နဲ့ မပြောင်းရွှေ့ခင်မှာ လီဗာပူးနည်းပြ ယာဂင် ကလော့ နဲ့ မန်ယူနည်းပြ ဆိုးရှားတို့ နဲ့ စကားပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ ပြင်သစ်သတင်းစာ က ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
⚽ ပီယာလို ကတော့ သူ့ အနေနဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ် ကလပ်တွေက ကမ်းလှမ်းမှု ကို လက်ခံ ရရှိခဲ့ပေမယ့်လည်း သူက ငြင်းပယ်ပြီး ဂျူဗီ အသင်းက ရဲ့ U23 မန်နေဂျာ အဖြစ် ဆောင်ရွက်ဖို့ လက်ခံခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။
⚽ မန်ယူအသင်းက သူတို့ ကာလရှည်ကြာစွာ ပစ်မှတ်ထားနေတဲ့ အသက် ၂၉ နှစ်ရှိပြီ ဖြစ်တဲ့ တိုက်စစ်မှူး ဂျီမီနက်ဇ် ကို စီးရီးအေ ချန်ပီယံ ဂျူဗီ အသင်းကို လက်လွှတ်လိုက်ရဖွယ် ရှိတယ်လို့ AS က ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
⚽ အာဆင်နယ် အသင်း အနေနဲ့ မန်စီးတီး အသင်းက ထွက်ခွာတော့မယ့် ဂျွန်စတုန်းကို ပေါင် သန်း ၂၀ နဲ့ ခေါ်ယူသင့်တယ် ဆိုပြီး ကစားသမားဟောင်း ရေးပါလာက ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ ဒီကစားသမားကို ဝက်စ်ဟမ်း ကလည်း လိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။
⚽ လီဗာကူဆင်က က သူတို့ ကစားသမားဖြစ်တဲ့ ကိုင်ဟားဗက်စ် အတွက် ဘယ်အသင်း ထံကမှ ကမ်းလှမ်းချက် မရရှိသေးဘူးဆိုပြီး ထုတ်ပြန်ကြေငြာလိုက်ပါတယ်။ ကိုင်ဗားဗတ်စ် ကို ဥရောပ ကလပ်တွေ တော်တော်များများက စိတ်ဝင်စားနေသလို ချဲလ်ဆီးအသင်းကို ပြောင်းရွှေ့မယ်ဆိုပြီး သတင်းကျယ်ကျယ်လောင်လောင် ထွက်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
⚽ ချဲလ်ဆီးအသင်းက နည်းပြ လမ်းပတ် ကတော့ အာဆင်နယ် နောက်တန်း ဖြစ်တဲ့ ဒေးဗစ်လုဇ် ရဲ့ အရည်အသွေးကို သိကြောင့် သူ့ကို အဓိကထားပြီး ထိုးဖောက်တိုက်စစ်ဆင်မှာ မဟုတ်ကြောင်း FA ဖလား မတိုင်ခင်မှာ ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
နောက်ဆုံး ဘောလုံး သတင်းများကို ဖတ်ဖို့ အောက်ပါ Page ကို Like ထားပါ။
[ZAWGYI] ⚽ ဒီေန ့ည ၾသဂုတ္ ၁ ရက္ေန့ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ည ၁၁း၀၀ မွာ အာဆင္နယ္ အသင္း နဲ့ခ်ဲလ္ဆီး အသင္းတို ့က FA ဖလားဗိုလ္လုပြဲ ကန္မွာျဖစ္ပါတယ္။ အာဆင္နယ္ အသင္းက သူတို့အသင္း ရဲ့ ဆုိး၀ါးလွတဲ့ ရာသီကို အႏိူင္နဲ့ပိုင္းဖို့အျပင္ ေနာက္ႏွစ္ ယူရုိပါလိဂ္ ၀င္ခြင့္ရေအာင္ ေရကုန္ေရခမ္း ကန္မွာျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ဖက္မွာ ခ်ဲလ္ဆီး အသင္းကလည္း ခ်န္ပီယံလိဂ္ ၀င္ခြင့္ ရရွိျပီးျဖစ္ေပမယ့္ ဒီဖလားက လမ္းပတ္ အတြက္ ပထမဆုံး ဖလား ျဖစ္လာဖို့လက္တစ္ကမ္းအကြာမွာ ရွိတာေၾကာင့္ ခ်ဲလ္ဆီး အသင္းလည္း အႏိူင္မခံအရွဳံးမေပး ကန္မွာျဖစ္ပါတယ္။
အာဆင္နယ္ အသင္းဘက္ကေတာ့ မူစတာဖီ က တံေခါက္ေၾကာေၾကာင့္ ခြဲစိတ္ ကုသမႈ ခံယူရေတာ့မွာျဖစ္တာေၾကာင့္ ပါ၀င္ႏိူင္မွာမဟုတ္ပါဘူး။ မာရီ လည္း ပါႏိူင္မွာ မဟုတ္သလို မာတင္နယ္လီ နဲ့ခ်မ္ဘာ တို ့လည္း ကစားႏိူင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဆိုးရက္စ္ ကေတာ့ cup-tie မိေနလို့ပါ၀င္ခြင့္ရမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ လီႏိူက ဒဏ္ရာက သက္သာလာျပီ ျဖစ္ေပမယ့္ အာတီတာကေတာ့ ထည့္ကန္ဖြယ္ မရွိပါဘူး။
အာဆင္နယ္ ျဖစ္ႏိူင္ဖြယ္ရာ လိုင္းအပ္ – Martinez, Bellerin, Holding, David Luiz, Tierney, Saka, Ceballos, Xhaka, Aubameyang, Lacazette, Pepe.
ခ်ဲလ္ဆီးအသင္း က ကန္ေတ ကေတာ့ ျပန္ကစားႏိူင္မွာ ျဖစ္သလို ၀ီလ်ံလည္း အသင္းနဲ့ ျပန္ပါ၀င္ႏိူင္မွာပါ။ ရူဘင္ ကေတာ့ ပါ၀င္ႏိူင္အုန္းမွာ မဟုတ္ပါဘူး။
ခ်ဲလ္ဆီး ျဖစ္ႏိူင္ဖြယ္ရာ လိုင္းအပ္ – Caballero, James, Azpilicueta, Rudiger, Zouma, Alonso, Kovacic, Jorginho, Mount, Pulisic, Giroud.
လန္ဒန္ ျပိဳင္ဘက္ ကလပ္ပီပီ ၂ သင္းလုံး အႏိူင္မခံ အရွဳံးမေပး ကန္မွာမလို့ပြဲၾကီး ပြဲေကာင္း တစ္ပြဲ ျဖစ္လာမွာပါ။ မႏွစ္က မန္စီးတီး နဲ့၀တ္ဖိုဒ့္လို ပြဲ မေကာင္းမွာ မပူရပါဘူး။ အာဆင္နယ္ အသင္း FA ဖလား ဗိုလ္လုပြဲကို ၂၁ ၾကိမ္ေျမာက္ ကန္မွာ ျဖစ္ျပီး စုစုေပါင္း ၁၃ ၾကိမ္ ဗိုလ္စြဲထားပါတယ္။ အာဆင္နယ္ က တစ္ျခား အသင္းေတြက ဗိုလ္လုပြဲ ေရာ ဗိုလ္စြဲတဲ့ အၾကိမ္ပါ ပိုမ်ားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အာဆင္နယ္ အသင္းကပဲ ၂-၁ နဲ့အႏိူင္ရ ဗိုလ္စြဲျပီး ယူရိုပါလိဂ္ ၀င္ခြင့္ကို ဖလားနဲ့အတူ ရရွိသြားႏိူင္ပါတယ္။
⚽ မန္ယူအသင္းက တစ္ကယ္လို့ဒီလာမယ့္ အေျပာင္းအေရႊ့မွာ ဆန္ခ်ဳိကို အရ ေခၚယူႏိူင္ခဲ့မယ္ဆိုရင္ အသင္း ရဲ ့အထင္ကရ နဲ့ ေက်ာ္ၾကားလွတဲ့ ေက်ာနံပတ္ ၇ ကို ေပးဖို ့အတြက္ အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနတယ္ ဆိုျပီး Daily Mail က ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။
⚽ ဗစ္တာ အိုဆင္ဟမ္ က နာပိုလီ အသင္းကို ေပါင္ သန္း ၅၀ နဲ့မေျပာင္းေရႊ့ခင္မွာ လီဗာပူးနည္းျပ ယာဂင္ ကေလာ့ နဲ့မန္ယူနည္းျပ ဆိုးရွားတို့နဲ့စကားေျပာဆိုခဲ့တယ္လို့ျပင္သစ္သတင္းစာ က ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။
⚽ ပီယာလို ကေတာ့ သူ့အေနနဲ့ပရီးမီးယားလိဂ္ ကလပ္ေတြက ကမ္းလွမ္းမႈ ကို လက္ခံ ရရွိခဲ့ေပမယ့္လည္း သူက ျငင္းပယ္ျပီး ဂ်ဴဗီ အသင္းက ရဲ့U23 မန္ေနဂ်ာ အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ဖို့လက္ခံခဲ့တယ္လို ့ဆိုပါတယ္။
⚽ မန္ယူအသင္းက သူတို့ကာလရွည္ၾကာစြာ ပစ္မွတ္ထားေနတဲ့ အသက္ ၂၉ ႏွစ္ရွိျပီ ျဖစ္တဲ့ တိုက္စစ္မွဴး ဂ်ီမီနက္ဇ္ ကို စီးရီးေအ ခ်န္ပီယံ ဂ်ဴဗီ အသင္းကို လက္လႊတ္လိုက္ရဖြယ္ ရွိတယ္လို့AS က ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။
⚽ အာဆင္နယ္ အသင္း အေနနဲ့မန္စီးတီး အသင္းက ထြက္ခြာေတာ့မယ့္ ဂြ်န္စတုန္းကို ေပါင္ သန္း ၂၀ နဲ့ ေခၚယူသင့္တယ္ ဆိုျပီး ကစားသမားေဟာင္း ေရးပါလာက ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။ ဒီကစားသမားကို ၀က္စ္ဟမ္း ကလည္း လိုက္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။
⚽ လီဗာကူဆင္က က သူတို့ကစားသမားျဖစ္တဲ့ ကိုင္ဟားဗက္စ္ အတြက္ ဘယ္အသင္း ထံကမွ ကမ္းလွမ္းခ်က္ မရရွိေသးဘူးဆိုျပီး ထုတ္ျပန္ေၾကျငာလိုက္ပါတယ္။ ကိုင္ဗားဗတ္စ္ ကို ဥေရာပ ကလပ္ေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက စိတ္၀င္စားေနသလို ခ်ဲလ္ဆီးအသင္းကို ေျပာင္းေရႊ့မယ္ဆိုျပီး သတင္းက်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ ထြက္ေနခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။
⚽ ခ်ဲလ္ဆီးအသင္းက နည္းျပ လမ္းပတ္ ကေတာ့ အာဆင္နယ္ ေနာက္တန္း ျဖစ္တဲ့ ေဒးဗစ္လုဇ္ ရဲ့အရည္အေသြးကို သိေၾကာင့္ သူ ့ကို အဓိကထားျပီး ထိုးေဖာက္တိုက္စစ္ဆင္မွာ မဟုတ္ေၾကာင္း FA ဖလား မတိုင္ခင္မွာ ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။